Nagarik News - प्रेम होइन, सजिलो त पाखण्ड हुन्छ
मैले कलेजमा आफूसँगै पढ्ने साथीसँग लामो समय प्रेम सम्बन्ध राखेपछि नै विवाह गरेको हुँ। तर, प्रेम सम्बन्धकै बारेमा धेरै दिमाग लगाएर घोत्लिएको भने छैन। एकताका ओशो पढ्दा उनले नित्सेका बारेमा भनेको सुनेरै मैले प्रेमका बारे धेरै दिमाग नखियाउने निधो गरेँ हुँला जस्तो लाग्छ। कारण, नित्सेले जिवनभर प्रेमबारे दार्शनिक चिन्तन गरेर हजारौँ पृष्ठ लेख्नुको साटो एक वाक्यमा निचोड निकाल्दै भनेका थिए रे, 'लभ इज बियोन्ड गुड एन्ड इभिल।' अर्थात्, प्रेम राम्रो वा नराम्रोको भेदभन्दा माथिको विषय हो।
प्रेम सम्बन्ध स्थापित हुनुभन्दा पहिले मैले घरमा र विद्यालयमा लामो समय नैतिक शिक्षा आर्जन गर्ने सुअवसर पाएको थिएँ। मेरो त्यति लामो शिक्षा आर्जनकालमा जानेको त उही राम्रो र नराम्रोको भेद छुट्याउनमात्रै हो। अब त्योभन्दा माथिको विषयमा कसरी हात हालुँ भन्दाभन्दै साथी खोजियो, प्रेम हुन थालेको अनुभूति भयो, अन्ततः विवाह गरियो। आखिर प्रेमको परिभाषा त गरिएकै रहेनछ।
केही दिनअघि शुक्रवारबाट फोन आयो। भ्यालेन्टाइन्स डेको अवसरमा एउटा लेख चाहियो भन्ने आग्रह थियो। आग्रह टार्न नसकेर हुन्छ भनेँ तर जे चिजको परिभाषा गर्न सकिएकै छैन, त्यसका बारे लेखुँ के? कतिले बजारमा पाइने ग्रिटिङ कार्डका पछाडि लेखेका फूलबुट्टे पदावली जोडेर बडो भावुक निबन्धहरू लेखेको देखेको थिएँ। बजारले नै मानवीय सम्बन्धहरूको परिभाषा गरिरहेको यो याममा त्यसै गरे सजिलो होला भन्ने मनमा नआएको होइन। तर, बजारले एसेम्ब्ली लाइनमार्फत बनाएका हजारौँ तुक्के परिभाषामध्ये कुन छान्ने भन्ने सकसले गाँज्ला भनेर त्यो लेठो गरिनँ। बरु भर्खरै श्रीमतीले डाइभोर्स दिएको एक मित्रसँग च्याटमा लामो संवाद गरेँ। उसलाई पो थाहा छ कि प्रेमको परिभाषा?
मेरो यो साथी केही वर्षदेखि विदेशमा छ। यता हुँदा उसले बडो लगन र मिहिनेतसाथ प्रेम गरेको थियो। तर, घरको आर्थिक अवस्था बिग्रँदै गएपछि उसलाई प्रेम मात्र गरिरहने छुट भएन। विदेशिने निधो गर्योक। विदेशिनुअघि आफ्नी प्रेमिकासँग विवाह पनि गर्योई। तर, विदेश गएको केही दिनदेखि उसको पतित्व उर्लेर आयो। घरमा एक्लै छोडेकी श्रीमती पतिव्रता भएर नबस्ली भन्ने शंकाले बिस्तारै उसको दिमाग कब्जा गर्न लाग्यो। बेला– बेला फोन गरेर श्रीमतीको खैखबर लिइरहने उसको बानी बस्यो। त्यतिले मात्रै पुगेन, उसले फेसबुकमा कसले लाइक गरे, कसले के कमेन्ट गर्योख भनेर चियोचर्चो पनि थाल्यो। शंका समन भएन, बरु वृद्धि हुँदै गयो। त्यहाँसँगै काम गर्ने साथीहरूसँग पनि श्रीमान् विदेश भएका बेला श्रीमती अर्कैसँग हिँडेका किस्साहरू सुन्न थाल्यो। माइग्रेन्ट वर्कर र माइग्रेसनमाथि विद्वता हासिल गरेका विश्लेषकहरूले पनि उही परिवार विखण्डन भएको र यस्ता धोकाधडी भएका बारे व्याख्यान छाँटेको उसले पढ्न थाल्यो। जति ऊ यस्ता कथा–कहानी सुन्थ्यो, विदेश जाने लहरले पारपाचुके बढेका समाचार पढ्थ्यो, उसको मनमा आगो सल्किन्थ्यो।
श्रीमतीप्रति अति शंकालु बन्दै गएपछि उसले कुनै बहाना बनाएर श्रीमतीको फेसबुक एकाउन्टको पासवर्ड माग्यो। श्रीमतीले सजिलै पासवर्ड दिई। उसले फेसबुकका इन्बक्स छान मार्योश। शब्द–शब्द केलाएर हेर्दै गएर उसले श्रीमती पतिव्रता नभएकी निधो गरेर फोनमै झगडा गर्न थाल्यो। झगडा बढ्दै गएपछि ऊ विदेशमा बसिरहन सकेन, छ महिना नपुग्दै नेपाल उत्रियो। लामो विवाद र झगडा भएपछि, केही पढालिखा र बोल्न सक्ने, काम गरिखानसक्ने उसकी श्रीमतीले पारपाचुके गर्ने निर्णय गरी। उनीहरू अलग्गिए। ऊ फेरि विदेश उड्यो।
उसले यति त मलाई पहिले नै सुनाएको थियो। मैले च्याटमा सोधेँ, 'अब त शंका गर्नुपर्ने केही रहेन। ढुक्क होला नि?'
उसले जवाफ लेख्यो, 'अहिले पनि उसको फेसबुक हेरिरहन्छु। मलाई ब्लक गरेको छैन। त्यसैले उसको कोसँग के कुरा भइरहेको छ भनेर हेरिरहन्छु। उसले केटाहरूसँग गफ गरेको देखेर रिस उठ्छ।'
'तिमीलाई उसको माया लाग्दैन? अस्तिसम्म भइरहेको प्रेम अहिले सकियो?'
'त्यही माया लागेर त फेसबुकमा गएर फोटो हेर्छु। तर, कमेन्ट–समेन्ट हेरेपछि रिस उठ्छ अनि बन्द गर्छु।'
'उसले पनि विवाह गरेकी छैन। फेरि कुनै दिन तिमीहरूको सम्बन्ध स्थापित हुन सक्ला नि? अहिले त शंकैशंकाले लंका जलाएको जस्तो मात्रै लाग्यो।'
'म पनि कहिलेकाहीँ सबै बिर्सेर फेरि फोन गरेर कुरा गर्न थालौँ कि भन्छु। तर, त्यो त अरूसँगै सुतिसकेकी छ। अर्कैसँग सुतेपछि त सकिगयो नि।'
संवादपछि मलाई लाग्यो उसले पाएको नैतिक शिक्षा मैले पाएको शिक्षाभन्दा बलियो रहेछ। शुद्ध/अशुद्ध, पवित्र/अपवित्र, राम्रो/नराम्रो... यस्ता भेदहरू बडो सहजताका साथ छुट्याउन सक्ने। त्यही भेदबाट आफ्ना सारा सम्बन्धलाई परिभाषित गर्ने। यो भेदको 'बाइनेरी'मा लगेर सारा संसारलाई राखेपछि आफ्नो र पराई छुटिन्छ। उसले पनि त्यही भेदमा लगेर छुट्यायो। आखिर पवित्र/अपवित्र छुट्याउन फेसबुकमा उसकी श्रीमतीको कुनै केटोसँग भएको संवाद र त्यो संवादमा प्रयोग भएका केही थान शब्दहरू बने। केही शब्दले श्रीमतीको अपवित्रता झल्कायो। बस, उसले निधो गर्योय– प्रेम 'शरिरको पवित्रता'ले निर्धारण गर्छ र त्यो नै नरहेपछि सम्बन्ध कायम राख्नुको कुनै तुक छैन।
हाम्रो प्रेमलाई हाम्रै हुर्काइ, हामीले पाएको शिक्षा, हाम्रो सामाजिकीकरण, हाम्रो जात र हाम्रो वर्गले नै परिभाषित गरिसकेको हुँदो रहेछ। हामी त पहिल्यै गरिएको परिभाषाको कैदखानामा वरपर फन्को मार्ने मात्रै रहेछौँ। जस्तो, मेरो यो साथी अहिले पनि त्यही कैदखानामा कुण्ठित भएर बसिरहेको छ। परिभाषा बदल्नलाई पनि धेरै चिज बदल्नुपर्ने होला, सिंगो समाज नै बदल्नुपर्ने होला। समाज बदल्नु गाह्रो छ, प्रेम गर्न पनि गाह्रो छ। सजिलो त भएकोलाई नबदल्नुमा हुन्छ। प्रेम होइन, सजिलो त पाखण्ड हुन्छ। जस्तो ३६४ दिन होच्याएर, स्वतन्त्रता निमोठेर, आफ्नो नियन्त्रणमा कैद गरेर, वर्षको एक दिन भनिन्छ– 'ह्याप्पी भ्यालेन्टाइन्स डे। आई लभ यू।'
गाम्काको मनपरी शुल्क
सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गरेबापत महिला कामदारको ३१ सय र पुरुष कामदारको २ हजार ९ सय ४० रुपैयाँ शुल्क तोकेको छ। तर, १२ वटा मेडिकल सेन्टर सरकारी...